Xiddig ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain oo bartilmaameed u ah Manchester United oo hadlay… (Muxuu yiri?) – Gool FM
(Paris) 20 Maajo 2019. Difaaca kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Thomas Meunier ayaa shaaca ka qaaday inuu rajaynayo inuu baaqi ku sii ahaan doono garoonka Parc des Princes.
Meunier ayaa ku dhow dhammaadka xilli ciyaareedkiisii saddexaad ee kooxda haysata horyaalka Ligue 1, laakiin xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa heshiiskiisa haatan waxaa kaga harsan 13 bilood.
Kooxda Manchester United ayaa si xoog leh loola xiriirinayaa xagaagan inay u dhaqaaqi doonto soo xero-gelinta xiddigan 27-sano jirka ah, inkastoo kooxda Premier League laga yaabo inay ka carooto hadalkan ka soo yeeray difaacan ka tirsan PSG.
Meunier ayaa u sheegay Canal+: “Sida aan horay u sheegay weli wax kala cad ma jiraan oo ku saabsan aniga ama naadiga, dadku war ayey isla dhexmarayaan bidix iyo midig, laakiin weli waxaan haystaa hal sano oo ka dhiman qandaraaskeyga.”
“Kooxdu waa ay garanaysaa booskeyga, had iyo goor waxaan iraahdaa anigu waxaan doonayaa inaan joogo, marka taas laga soo tagana, maku haboonahay iyaga mise kuma habooni, wali wax kala cad ma jiraan illaa waqti xaadirkaan, waan arki doonaa waxa dhaca.”
Meunier ayaa 22 kulan ku soo bilowday safka hore horyaalka Faransiiska iyo tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.